Community & Society » သီတဂူ သုမေဓာ ဆေးရုံ (အစုကြီး ကျေးရွာ)	286
ကြင်နာမှု မေတ္တာ ဂရုဏာ တရားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော လောကကြီး ဖြစ်စေဖို့ အားလုံး တူညီ လက်တွဲပြီး ဆေးရုံ အတွက် ဆေးဒါန ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါစို့
minn zaw says: ဆူးနဲ့ မမ ခင်ဗျာ ကျွန်တော် ၃၀ ရက်နေ့ မန္တလေးလာဖြစ်မှာပါ။
ဆူး says: ရေသန့်ကို ဆူး ရဲ့ ဆိုင်ကိုပဲ လာပို့ထားပေးပါ..
laypai says: ဒီတခေါက်တော့ လှူ ဖြစ် အောင် လှူ ရမယ်။
ဆူး says: မှန်ပါတယ်။
MaMa says: ရွာစားကျော်အတွက် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ ပုံစံလေးပြောပေးချင်တယ်။
Khin Latt says: ဆူးလေး ရေးထားတာ အခု မှ ဖတ်ရတယ်။
ဒါလဲ ရှေးက ပါလာတဲ့ ရေစက်လား။ သူကြီး သိရင် အဲဒီ ရေစက် က ရေတွေ ကို လူတွေသုံးဖို့ ဝေပေးခိုင်းနေဦးမယ်။ :D
weiwei says: အရီးလတ်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ် …
kai says: အယ်လ်အေလည်လည်လာလေ…
Khin Latt says: ဝေရေ
အမေရီးကားက Cameron Diaz က လမ်းကျဉ်းကျဉ်း၊ အိမ်သေးသေး တွေ ကို သည်းမခံနိုင်လို့ ပြန်တော့မယ် လုပ်ပြီးမှ Jude Law နဲ့ တွေ့ပြီး မပြန်နိုင်ဖြစ်သွားတာ။ :D
ရွာစားကျော် says: မေဒေး မွေးနေ့ရှင် သမီးလေး မေ၀တီထွန်းရဲ့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် သီတဂူသုမေဓာဆေးရုံသို့ အလှူငွေ တစ်သိန်းကျပ်တိတိ ထည့်ဝင်ပေးပါရန် ကျနော့် အသိတယောက်က ယခုပဲ မှာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။
အလှူငွေစာရင်း ပိတ်ထားပြီဖြစ်လို့ ဆေးရုံရောက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ကိုယ်စားလှူပေးလိုက်မယ်… စိတ်ကူးပါတယ်ဗျာ.။ သမီးလေး မေ၀တီထွန်း.. နောင် သက်ဆုံးတိုင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် အောင်မြင်ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..။
ဆူး says: သမီးလေး မေ၀တီထွန်း အတွက် အလှူ စာရင်း မှတ်ထားပေးမယ်နော်။
ဆူး says: အရီးလတ် ရေးတဲ့ ကွန်မန်းလေး အခုမှ တွေ့ပြီး ဖတ်မိတယ်။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ထကြဗျို့ အလှူသွားမယ့်ကားက အခြေနေအရ
ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) ( ကျား ) says: ငခြောက်တို့ရွာက ကြက်က မနက်သုံးနာရီခွဲသီချင်းဆိုတယ်ပေါ့လား
MaMa says: အလှူအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆော်ကြီး ဘကြီးပုလည်း လှူဒါန်းတဲ့ ကုသိုလ်ဒါနတွေကို ထပ်တူရပြီး ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်နိုင်ပါစေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8419
ဆူး says: ဘကြီးပု ရေ.. ဆူး တော့ မနက် ၄နာရီ ထတယ်။
Foreign Resident says: အဘ ( Foreign Resident ) က အဲဒီအလှူမှာ
ဆူး says: အလှူနေ့က ဖုန်းဆက်တဲ့ အချိန် ကားပေါ်မှာ ရွာသားတွေရဲ့ MG Brand ကြီး အရမ်းကို စည်ကားနေတဲ့ အချိန်ပါ။ ဖုန်းဆက်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Khin Latt says: ဒီအချိန်မှာ သူတို့ ထမင်းလုံး စီ နေကြပြီ။ ( မြန်မာ စံတော်ချိန် နေ့လည် နှစ်နာရီ ခွဲ)
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ :D
ဆူး says: မြန်မာစံတော်ချိန် ၂နာရီခွဲ အချိန်လောက်မှာတော့ အစုကြီးရွာကနေပြန်လာပြီး ပန်းတနော် က ဖျာ ဆိုင်မှာ shopping ထွက်ပြီး ဖျာဝယ်နေကြပါသည်။
weiwei says: ရွာအလှူတော် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ ..
Swal Taw Ywet says: Updated at 6:45 pm Myanmar time.
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ Let’s try our best for our mother land.
aye.kk says: ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ..
ဆူး says: ဆူး တို့ ရဲ့ အလှူကို ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓု ခေါ်တဲ့ အတွက်လည်း ၀မ်းမြောက်ပါတယ်။
mg mg says: သာဓုပါဗျာ-သာဓု—သာဓု။
ဆူး says: ပို့သ သော မေတ္တာကြောင့် အစစ အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ပါတယ်။
bigchef says: သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျား။
ဆူး says: ဆူး ကို ယခု အလှူ အတွက် ပထမဆုံး လှူတဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါတဲ့ အလှူရှင်တွေ မို့ ကောင်းစွာ မှတ်သားထားပါတယ်။
ငပွကြီး says: သာဓု…သာဓု…သာဓု….ဗျာ…
ဆူး says: ဆူးလည်း ကိုပွကြီးကို အလှူကို လာစေချင်ပါတယ်။
တညင်သား says: ပြုသမျှ ကုသိုလ်အစုစု အတွက် အမျှ . အမျှ . အမျှ ပေးဝေရင်း…..
ဆူး says: အလှူ ကိစ္စ သတင်းမေး ဖုန်းဆက်ပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ရောင်ခြည်ခ says: ပီတိများဖြင့် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ပါတယ်နော်၊
ဆူး says: အလှူ ပိုစ်တွေ ဖတ်ပြီး မနက်စောစော စီးစီး ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ဖုန်းဆက် သတင်းမေးပြီး ၀မ်းသာကြောင်း ပြောပြတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
zin min says: ကျတေ်ာ မသိလို့ မေးပါစေ ခင်ဗျာ. အလှူ လုပ်တယ်ဆိုတာ ရေစက်ချပြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုသာ လက်ခံရတယ်လို့ကျတေ်ာကြားသိရပါတယ်.။ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ဇီးကုန်းမြို့ မှာ တ၇ား နောက်ဆုးံည
အရီးခင်လတ် says: ဆရာတော်ကြီး တရားဟော တာကတော့ ဟောလိုက်တဲ့ တရား ကိုသာ ရနိုင်သ၍ အရယူလိုက်တာကောင်းပါတယ်။
အောင် ထက် says: အစုကြီးရွာအကြောင်းလေးသိချင်လို့ပါ နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြောပြကြပါဦး ပြီးတော့ ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲဆိုတာလေးပါသိချင်လို့ပါ
Ma Ma says: အစုကြီးရွာကို သွားချင်ရင် ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းကနေ သွားရပါတယ်။
အောင် ထက် says: ရွာအကြောင်းလေးပါတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါလား ကျနော် အရမ်းသိချင်နေလို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ma Ma says: ရွာတန်းရှည် ရွာတစ်ရွာပါ။
သိသလောက် ဖြေပါ့မယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5
အောင် ထက် says: မေးလက်စနဲ့ ထပ်မေးပါရစေဗျာ အဲ့ရွာလေးမှာ ဖုန်းဆက်လို့ရလားမသိဘူး ဖုန်းလိုင်းမမိဘူးလို့ကြားလို့ပါ ပီးတော့ ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းကရော ကောင်းလား ၇ွာလေးအကြောင်းကို သိချင်လို့ပါ
Ma Ma says: မနှစ်က ဒီရွာက ရွာသူားတွေ စုသွားတုန်းကတောင် ဖုံးလိုင်းမိပါတယ်။
Char Too Lan says: အိုက်နေရာပေါ့ မနှစ်ကမင်းသားမင်းသမီးတွေသိန်းနားဆယ်ဂျော် တွားလှူခဲ့တာလေ ပျော်စယာဂျီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5
အောင် ထက် says: ခုလိုသိသမျှပြောပြပေးလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်လဲမသိတာရှိရင်မေးမယ်နော် ကျေးကျေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike ← Older Comments